Ciidamada Maamulka Somaliland oo Xasilooni Dari ka Wada Xadka uu la Wadaago Degaanka Somalida Ethiopia. – Rasaasa News
Aug 2, 2011 Ciidamada Maamulka Somaliland oo Xasilooni Dari ka Wada Xadka uu la Wadaago Degaanka Somalida Ethiopia.
Jijiga, Ethiopia August 2, 2011 [ras] – Badhtamihii bishii July ayey ciidamo aan labis wadan oo ka tirsan maamulka Somaliland ka soo talaabeen xadka u dhaxeeya gabalka Dhagaxbuur iyo maamulka Somaliland, halkaas oo ay ku dileen 11 xubnood oo ka tirsan Booliska Degaanka Somalida Ethiopia.
Ciidanka Booliska ee ilaaliya xuduuda degaanka Somalida Ethiopia oo wata laba gaadhi marayeyna degaan ayna wax colaad ah ka filayn, ayaa si kadis ah waxaa rasaas ugu furay ciidamo loo aqoonsaday in ay ka soo talaabeen xadka Somaliland ah oo si sharci daro ah ku soo galay degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaana rasaas ayna la dhuldhicin ay haleeshay 11 xubnood oo ka tirsan ciidanka Booliska oo uu ka mid yahay taliyihii watay ciidanka. Ciidamada Booliska ayaa marayey meel u dhaxaysa Tuulooyinka Samatar Axmed iyo Tuulada Xalxalis marka uu weerarku dhacay.
Ciidamada Somaliland ayaa mudo dheer iyaga oo aan laga warhaynin u soo talaabi jiray Tuulooyinka xadka waxyeelan u gaysan jiray ciidanka Booliska degaanka Somalida iyo dadweynaha iyaga oo iska dhigaya ONLF.
Waxaa kale oo jira buu yidhi waryaha warka noo soo diray, in marmarka qaarkood ay degaanada soo galijireen masuuliyiinta Somaliland, oo meelo fagaare ah kula hadli jiray dadweynaha degan degmooyinka xadka ah.
Shacabka gabalka Dhagaxbuur ku nool ayaa mudo badan ku jiray dulmi ah in Gabalka Dhagaxbuur uu hoy u yahay ONLF, arintaas oo ahayd buun buunin uu samayn jiray maamulka Somaliland, oo had iyo goor u soo diri jiray ciidamo xasarad ka sameeya degmooyinka xadka xigga.
Sanadkii 2005, ayey ahayd kolkii ay xadka si badheedh ah oo sharci daro ah ku soo galeen masuuliyiinta Somaliland, xiligaas oo ay sheegeen in ay u soo gurmadeen laba beelood oo ay colaadi ku dhex martay degaanka Somalida Ethiopia.
Dadeynaha ku nool gabalka Dhagaxbuur ee xiga dhinaca xadka Somaliland ayaa soo baneeyey degaanadooda iyaga oo xamili waayey dhibaatooyinka ayna garanaynin ee lagu sheego in ay ONLF wado.
Wali ma jiraan wax talaabo ah oo uu ka qaaday Booliska degaanka Somalidu dilka badheedhka ah ee lagula kacay Booliska degaanka. Nasiib wanaag baadhid ka dib waxay Boolisku ogaadeen in ciidamada ka dhaqdhaqaaqa gabalka in ay yihiin ciidamada maamulka Somaliland.
Dawlada degaanka Somalida Ethiopia, xiligan waxay aqoonsatay in dhibaatooyinka u badan ee ka jira gabalka Dhagaxbuur uu masuul ka yahay maamulka Somaliland.
Dhinaca kale maamulka Somaliland ayaa gacan ka siiya nabad diidka Ethiopia sidii ay hawlo argagiso uga fulin lahaayeen gudaha Ethiopia.
Dawlada dhexe ee Ethiopia, ayaa aad isha ugu haysay dhaqdhaqaaqyada la xidhiidh Al shabaab, ee ka jira maamulka Somaliland, waxaana la cadeeyey in ugu yaraan labo mar uu magaalada Burco yimid Ina Godane, oo ah madaxa ugu sareeya ururka Al shabaab.
Dawlada Ethiopia, ayaa labadii bilood ee ugu dambaysay ugu yeedhay masuuliyiinta Somaliland degaanka Somalida Ethiopia, iyada oo kala xaajoonaysa arimaha maamulka Somaliland uu ka wado gabalka.